Eritreritra - SmartMe
Dom » hevitra
Alohan'ny hividianana dia ilaina ny mamaky fanamarihana azo antoka momba ny fitaovana. Izahay dia mizaha ny vahaolana sy gadget mahaliana indrindra - fakan-tsary, sensor ary fitaovana hafa ao an-trano izay mahatonga ny tranonao ho hendry. Manombana ihany koa ny fitaovan'ny solosaina amin'ny talantalana isan-karazany.
Jimmy, Jimmy JV85 Pro, odkurzacz stojący, Mpitroka ny loto ao, vacuum madio
Yeelight V1 Pro - Famerenana ny jiro tonga lafatra ho an'ny Office Office
fahazavana, Yeelight V1 Pro
Ny horonantsary voalohany amin'ny andiany Smart Home Office 🖥! Ity ny Yeelight V1 Pro azontsika tamin'ny SmartDom.co! Jiro marani-tsaina 🛋 miaraka amin'ireo mpanampy! 😀
ActionBox avy amin'i BleBox. Vonona? Mizara!
2 Aprily 2021
Androany, famerenana fohy ny ActionBox avy any BleBox, satria ny hetsika dia tokony ho feno sy fohy! Ary raha efa novakianao ny fidirako BleBox teo aloha dia mety efa fantatrao fa tena tiako ireo fitaovana ireo. Alohan'izany dia afaka ...
Lenovo Smart Clock - zavatra kely iray, fa kosa mahafaly anao
google assystent amin'ny fiambenana, Famantaranandro Lenovo, mahay miteny
Ny Lenovo Smart Clock dia famantaranandro misy mpandahateny sy Mpanampy Google. Na izany aza, voafetra kokoa noho ny Google Hub na ny Nest Hub ho avy io. Ka maninona aho no manoratra momba azy dieny izao? Nanontany tena ela aho hoe ahoana ny momba azy ...
Neatsvor x500 - Famerenana ny Robot Vacuuming ho an'ny PLN 500
neatsvor, NEATSVOR X500, vacuum madio
Ilay mpanadio banga robot Neatsvor X500 dia manana ny isa 500 amin'ny anarana sy ny vidiny. Ka raha te-ho mpamonjy amin'ny fividianana ny robot ianao dia ho anao ity horonantsary ity!